Lars Ohly oo ka baxay xisbigii uu hoggaankiisa mar hayay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lars Ohly iyo sumadda xisbiga Vänsterpartiet.
Lars Ohly oo ka baxay xisbigii uu hoggaankiisa mar hayay
La cusbooneeyay tisdag 9 januari kl 17.07
La daabacay tisdag 9 januari kl 14.12
Hoggaamiyihii hore ee xisbiga Vänsterpartiet Lars Ohly ayaa ka baxay xisbiga, middaasina oo ku macneeyay iyada oo uu hoggaanka xisbigu ka xiray dhammaan dhaqdhaqaaqyadii xisbiga kadib isaga oo lagu eedeeyey fara-xumeeyn.
–Ma aanu ahayn go’aan fudud, dhanka kale ma ahaan lahayn qof sharaftiisa dhowrta haddii aan ku sii jiri lahaa xisbi aanu hoggaankiisu ii ogolaanayn inaan lahaado xuquuq la mid ah xuquuqda dhammaan xubnaha xisbiga. Hoggaan xisbi oo muujiyay awood darri, sida uu sheegay Lars Ohly oo u warramayay laanta wararka ee ekot..
-Ma garanaayo in codkeeyga laga dareemayo, laakiin aad baan uga xumahay, aad baan uga qalbi-jab sanahay. Weligay xitaa kuma aanan fekerin inaan maalin ku maalin ku fekeri doono inaan ku khasbanaado inaan ka fekero kala doorasho inaan xisbiga ka baxo iyo in kal, sida uu sheegay Lars Ohly, hoggaamiyihii hore ee xisbiga Vänter-ka.
Lars Ohly ayaa muddo 39 sannadood ah xubin ka ahaa Vänsterpartiet. Muddadaasina oo uu 6 sannadood ahaa xog-heeynta xisbiga, halka uu siddeed sannadoodna ku fadhiyay kursiga hoggaanka xisbiga.
Falka uu Lars Ohly di buga laabtay xubin-nimada xisbiga Vänster-ka ayaa ka dambeeysay in horraantii lagu eedeeyey inuu xaflad uu xisbigu lahaa ku fara-xumeeyay haweenay bishii sebteembar ee sannadkii ina dhaafay.
Lars Ohly ayaa eedeeyntaa iska dheereeyay, hase yeeshee raali gelin ka bixiyay, maadaama buuna sheegay uu ka daba dhegdhegay haweenayda.
Eedeeyntan ayaa laga gudbiyey dacwad, hase yeeshee uu ciidanka ammaanku sheegay in aanay jirin sabab loo sii wado.
–Ma jiro baaritaan laga sameeyay, ma jirto cid wax iga weeydiisay sawirka aan ka haysto eedeeynta. Waxa keliya ee aasaaska laga dhigtay waxay ahayd dacwadda loo gudbiyay ciidanka ammaanka iyo hab dhaqankayga aan wanaagsanayn ee aan ku falay xafladdii magaalada Malmö ee gabagabadii bishii sebteembar. Cid xiiseenaysay ma jirin arrimmahaa oo dhan, waxaase oo keliya la qaaday tallaabooyin la iiga hor istaagay howlaha xisbiga, sida uu sheegay Lars Ohly, hoggaamiyihii hore ee xisbiga Vänster-ka.
- Waa arrin laga xumaado inuu Lars Ohly ka baxo xisbiga, mana ahayn tallaabo ama shuruud aanu hor-dhigney. Lars Ohly wuxuu ahaa shaksi muhiim u ah xisbiga, waannuna ka xunnahey in aannu naga aqbalin annaga oo qiimeeneyna haweenayda eedaha ka sheegatay inuu muddo ka maqnaado howlaha xisbiga, sida ay sheegtay ku simaha xog-haynta xisbiga Hanna Gedin.